Cajal: 4 Qalabka Kaydinta Macluumaadka ee Wakhtigaaga ku Badbaadin doona
Barnaamijka waa qayb ka mid ah sayniska xogta. Mid waa inuu horumariyo xirfadaha barnaamijka si fiican u xoqaya macluumaadka gacanta. Si kastaba ha noqotee, dadka qaarkood ma baran karaan luuqadaha codka oo kala duwan oo raadso habab kale oo ku haboon. Qalabka wax lagu qoro ee soo socda waa kuwo aad u wanaagsan kuwa aan barnaamijka ahayn.
Kimono Labs ayaa muddo dheer ku sugnaa. Waa mid ka mid ah xogta ugu wanaagsan uguna muhiimsan ee soo-saartay codsiyada. Barnaamijkan banaanbaxani wuxuu ku yimaadaa 15-maalin oo tijaabo ah, laakiin xorna ah ayaa sidoo kale la heli karaa. Kimono Labs wuxuu kuusoo rogaa boggaga oo dhan, laga bilaabo uruurinta xogta illaa xajinta iyo ansixinta iyo dirista. Kimono Labs wuxuu kaloo u shaqeeyaa sidii ganacsade awood badan leh oo loo adeegsan karo iyada oo aan lahayn xeer. Halkaa, waxay kuu ogolaaneysaa inaad xoqdo tiro badan oo ah goobo isku mid ah isla markaana aan isku haleynin tayada. Kimono Labs waa marwalba doorashada koowaad ee shirkadaha, loo isticmaalo ururinta xogta, aragti, iyo urur. Waxay sidoo kale fulinaysaa falanqeyn weyn oo xog-wareysi ah dadka isticmaala, taas oo u sahlaysa shaqadooda.
2. Soo dejinta. Io
Xogta la goyn lahaa kuwa aan barnaamijka ahayni weligeed ma fududa ka hor. Waa mashruuc laga soo saaro shabakada internetka oo ay dhisteen khabiiro iyo sheegashooyin ah in la tirtiray tiro badan oo bogag intaa ka fog. Soo dejinta. Io waa weyn ma aha oo kaliya kuwa aan barnaamijka ahayn laakiin sidoo kale aqoonyahanada xogta. Qalabkani wuxuu si toos ah u ogaanayaa macluumaadka ugu fiican ee aad ubaahantahay ka hor intaanad bilaabin ka shaqeynta waxaana sidoo kale loo shaqeeyaa khabiirada qoraalka macdanta. Xayeysiintiisu waxay kuu sahleysaa inaad dooratid xog-khaladka-khaladka ah oo aad ku xoqdo qaabka la rabay.
3. Facebook iyo Twitter API
Khabiirada warbaahinta bulshada, bilowga iyo kuwa aan barnaamijka ahayn, Facebook iyo Twitter APIs waa kuwo waxtar leh. Waxay bixiyaan adeegyo xog-is-waydaarsi ah iyadoo loo marayo API-ga gaar ah oo qaado daqiiqado yar oo keliya si aad u hesho xogtaada la xoqay qaabka la rabay. Waxay isticmaashaa ilo cayiman si loo abuuro xogaha xogta iyo in ay kuqaraan boggaga internetka marnaba, iyada oo aan lahayn waxqabad barnaamijyo iyo aqoon farsamo. APIs waxay caawimaan xalinta dhibaatooyinka kala duwan ee la xiriira xogta, ogaadeyna waxtarrada ku jira qoraalkaaga, iyo inaad hesho macluumaad tayo sare leh labada sawirro iyo fiidiyowyo loogu talagalay dadka isticmaala.
4. Gaariga (Extension Chrome)
Haddii aad si joogto ah u isticmaashid Google Chrome oo waa shabakadda internetka ee ugu muhiimsan, waxaad isku dayi kartaa Wareer. Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee ugu fiican ee waxtarka leh. Waxaa lagu dhisay tiknoolajiyada barashada mashiinka waxaana si gaar ah loogu talagalay ardayda aan barnaamijka ahayn. Warshaduhu waxay soo saari karaan macluumaad faa'iido leh adiga oo leh waxyaabo aad u fiican. Xayeysiin spam ayaa lagu ogaanayaa inaad ka tirtirto xogta spam oo aad abaabusho macluumaad ku salaysan shuruudahaaga, iyada oo aan la haysan hingaad ama qalad naxwe ahaan. Gawracatadu waxay kaloo caawisaa falanqaynta faallooyinka boostada iyo emails, helitaanka xogta si wanaagsan, iyo go'aamiya in ay faa'iido u tahay ganacsigaaga ama.
Si ka duwan noocyada kale ee caadiga ah ee kaydka xogta, adeegyada kor ku xusan uma baahna inaad noqoto farsamo-maskaxeed. Sidoo kale, uma baahnid inaad barato luuqadaha barnaamijka si looga faa'iideysto kuwan waraaqaha xogta . Waxa kaliya ee lagaa rabaa inaad rakibtid oo aad ku dhaqaajiso si ay uga faa'iideystaan ​​doorashadooda iyo xogaha isdhaafka Source .